Imbewu kajongilanga, izibonelelo kunye nendlela yokuzibandakanya ekutyeni? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngaphandle kokuba neentyatyambo ezintle, ujongilanga unento ebhetele anokusinika yona: imbewu yayo. Imbewu ye-sunflower ephezulu kakhulu, inexabiso eliphantsi kwaye kulula ukuyifumana, zombini kwiivenkile ezinkulu nakwiivenkile ezikhethekileyo.
1 Yintoni imbewu kajongilanga?
2 Iipropathi zesondlo
3 Imbewu kajongilanga izibonelelo
4 Iifom zokusetyenziswa
5 Unonophelo lokusetyenziswa
Yintoni imbewu kajongilanga?
Imbewu kajongilanga isebenza njengesiqhamo sesityalo sikajongilanga (Helianthus annuus). Zivunwa kwiintloko ezinkulu zezityalo, ezifikelela kwiisentimitha ezingama-30 ububanzi.
Intloko enye nje kajongilanga inokuqulatha ukuya kuthi ga kwimbewu engamawaka amabini. Zimbini iintlobo zezityalo: enye yeyokuvelisa ioyile kajongilanga kunye nenye yokuvelisa imbewu yona.
Ityebile ngeprotein, ifayibha, amafutha, kunye nee-carbohydrate ezintsonkothileyo. Inobungakanani beevithamini kunye neeminerali, ngakumbi ivithamin E (i-antioxidant enamandla), ithusi, i-phosphorus, i-iron, i-magnesium kunye ne-selenium.
Imbewu kajongilanga izibonelelo
Izifundo zibonisa ukuba ukusetyenziswa kweembewu zikajongilanga yinto ekhuselayo kwisifo sentliziyo, uxinzelelo lwegazi kunye neswekile. Ukongeza, ukufakwa kwayo kwisicwangciso sokutya kuyacetyiswa ukuba uhlengahlengise imicu kunye / okanye ezinye izakha mzimba ezibalulekileyo.
Imbewu inokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo: ekulungiseleleni iikeyiki; Kunye neesaladi; njenge-oatmeal okanye i-acai topping; Inokutyunyuzwa ukuyongeza kwintlama yamalungiselelo amnandi, isonka, njl.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukusetyenziswa kweembewu zikajongilanga kufuneka kwenziwe ngaphandle kweqokobhe: uphononongo sele lubonakalisile ukuba iqokobhe linokuhambelana nekhekhe le-fecal, lenze ukwenzakala emathunjini.
Ukongeza, imbewu ine-cadmium, intsimbi enzima enokuqokelelana emzimbeni ibangele ukonzakala kwezintso. Nangona kunjalo, ungoyiki: Ukutya ukutya kweembewu zikajongilanga ngosuku akuyi kubangela ityhefu ye-cadmium. Ke ngekhe ungatyi kakhulu, njengezandla ezimbalwa ngosuku.